Dhacdooyinkii DECEMBER 2008dii & Miyey soo laabanayaan May 2021-ka!
April 28, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 14
AFEEF: Qoraalkan, kama turjumayo aragtida warbaahined ee Warsidaha PuntlandTimes, wuxuuna ku gaar yahay Qoraha oo ku saxiixan!
W/Qoray: Farah Abdulkadir Mohamed oo ah Qoraa iyo Falanqeeye inta badan wax ka qora arrimaha Soomaaliya & Geeska Afrika.
December, 2008dii waxaa taagnaa xiisado adag oo siyaaadeed una dhaxeeyey Madaxweynihii DKMG ahayd & Wasiirkiisii koowaad (Labada Allaha u raxmadee), goobtu waa Baydhabo, Anigoo ahaa xiligas wariye qora mareegtii caanka ahayd ee AllPuntland, waxaan aad u heli jiray xogaha iyo macluumaadka dhinacyada oo dhan.
Habeenimadii Jimcaha, 13kii December 2008-dii, waxaa mid kamid ah saaxiibadeyda xogtu ila wadagay macluumad ku wajahan in berri oo Sabti ah, Madaxweyne Yuusuf xilka ka qaadi doono RW Nuur Cadde (Deegaan doorashadiisu tahay Muqdisho), oo xariirkoodu uu gaaray meel aan xal laheyn! Subaxdii warkii baa dhacay. Sharciyadda xilka qaadista markiiba waxaa diiday Beesha Caalamka, IGAD oo Itoobiya hogaaminaysay & Odayaashii Muqdisho (Saamileydii xiligaas).
Taliye sare oo xiligas aad ugu dhawaa M/weyne Yuusuf oo maanta jooga ayaan weydiiyey Natiijaddu waxay noqoneyso, wuxuu igu soo koobay hadal-yar oo ilaa maanta aanan Ilaawin “Waan soconaynaa, Waqtiguna nama caawin doono” Waana kala tagnay.
Habeenkii Isniintu baxaysay, waxaan helnay macluumad cadeynaya in M/weyne Yuusuf magacaabi doono Raysalwasaare cusub markiiba waqti igama qaadan in aan magaca helo, lana hadlo Raysalwasaaraha aan lamagacaabin (Max’ed Gacma-Dheere).
Gacma-Dheere (Deegaan doorashadiisu tahay Cadaado) 16-kii December ayaa la magacaabay, waxaa diiday magacaabidiisa isla intii diiday xil ka qaadistii Nuur Cadde!
2-da go’aanba Dastuurkii KMG ahaa awood uma siineyn Madaxweyne Yuusuf, sida ay qabeen xiligaas Sharci-Yaqaanadu!
Maalmahaas, si weyn ayaa loo falanqeeyey maxaa dhici kara? Balse jawaabtu ma daahine Mareykanku waxay Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ugu sheegeen Airportka Nairobi in uu is casilo ama lagu soo rogi doono talaabooyin kale, waqti dheer ma qaadan markii ay Kenya sheegtay in ay xanibaad saarayso Cabdullahi Yuusuf & qoyskiisa.
Ugu dambeyn, Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf wuxuu baarlamanka Faderaalka hortooda isku casilay 24 December 2008-dii, siyaasadda halkaas ayuu kaga baxay, Ugu dambeyn-na wuxuu ku geeriyooday dalka dibadiisa.
Hadda oo la joogo, maanta waxaa aad loo hadal-hayaa macluumad la xariira isla dhacdadaas mid u e’eg, oo l sheegayo in uu ka dhici karo Fadhiga baarlamaanka ee la qorsheynayo 01-da bisha May, Natiijaddu ma isla tan ayay noqon doontaa mise waa isbedeli doontaa? inta aanan falanqeynin in aysan dhicin baan rajeynaynaa markaan eegno xaaladda dalkeenu maanta kusugan yahay ee qalafsanaanta siyaasadeed ah.
Kkkkk walee dadkii way ka qeylsheen oo garan layihiin shaxdaan, shaxdaan ma,ahan tii fashilka ee iska barta . Waa tii nabad iyo nolol.
ini Fargaajo waa nin waalan oo aan siyaasad waxba ka aqoon waa duqsi maalin walba fuud iskaga dhaca.siyaasiga dhabta ahi waa kan odorasa siyaasidsasa halka ay ku cagadhigandoonto kumana lug goo wada soo xirmaysa oo dead end ah hadhowna gacmaha ma taago. marka la fiiriyo habdhaqanka ini fargaajo waa qalbi caruur aan inaba siyaasad wax kala socon waxna uga bilownayn habayaraatee, ini fargaajo waxaa furaha ku roga oo remuut kuwada wada Fahad yaasiin oo argagixiso ah rabana inuu dalkan fashiliyo si uu argagixisada gacanta ugu galo. ini fargaajo haloo sheego naftu markay kalxanta timaado toobad lama aqbalo wax aad qaban kadhana maleh cid wax ku waydiinaysana male, waxaan kula talin lahaa inuu dalka isaga baxo kuna dhawaaqo inuu ka haray siyaasada dalka kuna fashilmay.
Xamar siyaasada Soomaaliya waxaay u ekeeysiisay, 2 nin oo guri weyn ninba qol kaga noolyahay oo uu nina yahay mulkiilaha guriga, halka kan kalena uu yahay nin guriga Kiro ku deggan. Kuwaa oo uu dhex marayo muran ku saabsan maamulka Guriga!
Marka arrinta Soomaaliya aay sidaa u ekeeysiiso Caasimadnimada Muqdisho, waxaa iska cad in uu Kiraalaha Murmay noqonayo, had iyo goor kan qaab foolxun irrida uga baxo!
Kiraalaha murmayna markan waxaa noqonaya, qofka Daaroodka ah ee Goof nin leeyahay is moodsiiyey in uu dadka ka dhexeeyo ee ku dhex murmay!
Fikirkaa mid ka duwan baan qabaa, horta Farmaajo ma yahay nin Daarood metela, intuu u geystay Jubbaland iyo Puntland uma geysan Muqdishu, Sool oo ka daba ooyeysa buu nacdal wejiga uga tufty. Nin kasta oo Somali ah, caadil ah, shaqo yaqaan waa welcome. Farmaajo is neither Daarood nor a good leader
Daaroodnimadu waa abtirsi uu ninba meel kaga arooro ee ma ahan magac aay cidi cid ku metesho. Laakiin anigu waxaan ka hadlay, sida dadka magacaa ku abtirsado loogu bahdilo Muqdisho oo aaysan weli u fahmin in aay meeshu tahay, Goof uu nin Hawiye la yiraahdo leeyahay!
Tusaale, 4tii Sano ee uu ninkan Farmaajo ah kursigaa ku fadhiyey waxaa Kursigaa kula fadhiyey, labo Madaxweyne oo beesha Hawiye ah oo xilka kaga horreeyey!
Ma kula tahay in aay 4tiisa sano ee xilkaa loo igmaday kursiga kula fadhin lahaayeen, haddii aay Caasimadda Soomaaliya tahay magaalo kale oo aaysan beeshan lahayn?
Sidoo kale ma kula tahay in aay labo Madaxweyne hore oo Daarood ah aay sidan oo kale awood u yeelan lahaayeen in aay Kursiga kula fadhiyaan, Madaxweyne aay xilka ku wareejiyeen oo Hawiye ah?
Waxaan kuugu darayaa labadan dhacdo oo faham dheer u baahan!
Mid waxaay ahayd. Allaha u naxariistee Madaxweyne C/llaahi Yuusuf ayaa markii uu Villa Soomaaliya joogay waxaa “Biil” loogu qoray, in habeen kasta Villa Soomaaliya lagu garaaco dhawr Saalbo oo Hoobiye ah!
Habeenkii dambe ayuu isaga oo Garoowe booqasho ku joogo wuxuu dadkii weeydiiyey!
War Xalay ma maqasheen wax Hoobiye ah oo Villa Soomaaliya ku soo dhacay?
Waxaa loogu jawaabay, maya Madaxweyne!
Wuxuu yiri. Hadda soo fiiriya marka aan ku laabto ayuu sida Roobkii ugu soo hooban doonaaye! Kkkk
Dhacdada 2aad ee wax ku qaadasha u baahan waxaay ahayd!
Sh. Shariif markii uu Farmaajo ugu dhaaranayey “Suma Wallahi” ayaa doodiisa waxaa ku jirtay!
Kan kuwa ka Xoog badnaa ayaan saarnaye muxuu “NOOLA JOOGAA” !!
Qofkii maan wax cabbiro leh hadalkaa Sh. Shariif waxaa uga soo baxayo labo fasiraad!
1- kuwa Farmaajo ka xoogga badnaa ee aay saareen in aay yihiin. Siyaad Barre iyo C/llaahi Yuusuf!
2- Sh. Shariif in uu Farmaajo iyo kuwii ka horreeyeyba u arko in aay yihiin dad la JOOGO!
Horta kuma lihi qabyaalad ma jirto oo Somali baynu u nahay, balse tan Xamar taala waxa ka weyn tan Garoowe taala, fiiri Dhoobo Daareed iyo inàmadii waardiyaha u ahaa waxa ku dhacay, xinjirtoodii oo dhulka taala baa shir lagu dul qabsadey , haddaanu Wersangeli ahayn kuma dhacdeen oo Mohamoud Saleebaan yahay. Farmaajo Xamar rag Habargidir ah buu guryaha ugu dhacay oo laayey oo kabihii ku aasay, wallaahi inaanu taa Garoowe ka sameeyeen oo nin Mareexaan ahi nin MJ ah ku dileen. Farmaajo Somali inta Hawiye hayey cid kale Rahanweyn ku dhahoo ma hayseed. Caasimada marka Illaahay Xamar ka dhigayey dulqaadka Hawiye buu ogaa.
Mr A.A XADE.
Midnimo Doon says:
Akhyaarta mucaarad iyo muxaafid,
Farmaajaha uu qoraaga filayo inuu is casilo waa kuma ma kan madaxweynaha ka ah Soomaaliya mise mid kale. Farmaajaha aan aqaan ee Buffalo deganaa, Farmaajahii dawladii ku meel gaarka ahayd ee xiligii Sheekh Shariif raysalwasaaraha ka ahaa, haddii qoraagu kaas aaminsan yahay inuu is casilayo qoraagu waa riyoonayaa. Waxaa fiican in qoraagu labadaas waqti dib ugu laabto: maxaa ka dhex dhacay isaga iyo guddigii jaaliyada Buffalo, New York. Tan kale sidee buu xukunka uga tegay markii uu raysalwasaaraha ahaa. Inuu iscasilaa waa calaacal timo ka soo baxeen.
Haddii dadka Soomaaliyeed oo dhan ka soo hor jeesto Farmaajo wuxuu oranayaa dhammaantood waa qaran dumis, wadama kale ayey u adeegayaan, iwm.
Anigu waxaan aaminsanahayn in xilligan xaalada Soomaaliya ka jirta awgeed in madaxweynuhu u tanaasulo ummadda Soomaaliyeed si laysugu soo jiido oo loo heshiisiiyo inkasta oo ay adagtahay in ay taasi dhacdo. Xalka Soomaalida ninkii danaynaya waa ogyahay inaan Farmaajo xal hayn mucaaradkuna xal hayn. Waa la doortaa qof ka ka baxsan labadaas siyaasadood waa haddii xal loo rabo Soomaaliya, haddii kale way adkaanaysaa in dalka dib kaysugu soo celiyo. Ninkii xoog aaminsani taariikhda adduunka dib ha ugu laabto, ummad midaysan ayaa xoog lagu maamulaa muddo kooban.
Gaylanoow taariikhda been ha ka sheegin. Maraykan kuma oran Madaxweyne Abdullah Aun. Asaga ayaa doortay oo gartay in uu is casilo. Wuxuuna iscasilay 29 kii Dec 2008 ee ma aysan ahayn taariikhda aad sheegtay. Aabahaa ayaa beentaas kuu sheegay waayo adaga ayaa la joogi jiray oo warka kuu soo diri kiray. Isku xishood oo jooji beenta.
Hadalkaaga milgaha leh dadka halkan kuxeeran in yar oo faro-kutiris ah ee aan kamid ahay ayuu maskaxdooda deeqayaa, intooda badan waa guulwadeyaal ay kacaannimadii weli maanka kaga qufulantahay oo kana dhex guuxayso.
Murtida aad madasha keentay ayaanan anigu 100% kugu raacsanahay, waxaana weeye sida aan hoos kusoo naqliyay:
“Xalka Soomaalida ninkii danaynaya waa ogyahay inaan Farmaajo xal hayn mucaaradkuna xal hayn…Waa in la doortaa qof ka ka baxsan labadaas siyaasadood”.
Xaqiiqadaas weeye tan Soomaali badan sixun useegan ee aan aniguba in muddo ahayd nalka ku ifinayay. Farmaajo iyo kuwaas ay Xamar isku laranyihiin waa wada qawsaarro siyaasadda hore ugu fashilmay maadaama ay si ba’an uga arradanyihiin falsafadda iyo qaddiyaddeeda dalkan xalka dhabta ah u ah ee qummaati u kala socodsiin lahaa.
Qawleysatadani falsafaddaas iyo qaddiyaddeeda ma gayaan oo garashadeedaba maleh, damac waalan iyo saaqidnimo siyaasadeedna way ugu darsameen oo ah sababta cillad mooyee aanay dalkan xal ugu noqon karin. Waaya-aragnimadooduna waa mid casri carraabay jaa la idlaatay.
Hadiiba aay dhacdo inuu farmaajo is casili ama doorasho looga guulaysto oo xukunka baneeyo baynu iswaraysan kuwiina indho ku garaad laha ahaw ee laalinkay joogaan uun wax kucabirow iyo inta kale ee siyaabo kale oo reeraysan u fekerow.
Hal mid iga qora:- SOMALIA IS ON THE FIRE AGAIN.
Puntland waa dadka keliya ee si qoto dheer u fahansan Farmaajo iyo kooxdiisa.
Qofkii saaxibul caqli ahi wuu garan karaa in aan labada kooxood ee hadda Muqdisho dabka ka shidayaa aanay xal Soomaalinimo hayn, oo ay talo kaga soo uruurtay dab qabadsii si aad dantaada u gaartid.
Markay taasi dhacdo waxaa muhiim ah in la helo hoggaan dhexdhexaad ah inkasta oo ay adagtahay waqtigan xaafirka ah waayo heerka ay waddanka gaarsiiyeen ayaa ah mid caqligii laga tegey oo xabbadu talinayso waxayna dib waddanka ugu celiyeen xiligii qabqablayaasha.
Awlalow halkaas ka wad wacyi gelintaada qiimaha badan.